Sida loo qoro Cinwaan
Daabacadaha marwalba waxay leeyihiin faa iidada ku duubida cinwaankooda iyo cinwaankooda sawir ama sharraxaad xoog leh. Boqortooyada dhijitaalka ah, raaxooyinkaas badiyaa ma jiraan. Qof kastaa waxyaabaha uu ka kooban yahay waxay umuuqdaan kuwo aad isugu eg natiijada Tweet ama Search Engine. Waa inaan kaqadano akhristayaasha mashquulka badan dareenka kafiican kuwa nala tartamaya si ay udhagsiyaan una helaan waxyaabaha ay raadinayaan.
Celcelis ahaan, shan jeer in ka badan inta dadku akhriyaan cinwaanka sida loo akhriyo nuqul jirka ah. Markii aad qorto cinwaankaaga, waxaad ku bixisay 80 senti dollarkiina.
David Ogilvy, Qirashada Nin Xayeysiin ah
U fiirso ma aanan dhihin sida loo qoro clickbait, ama sida loogu helo akhristayaasha kaliya inaad gujiso. Markasta oo aad taas sameyso, waxaad lumineysaa kalsoonida adag ee akhristahaaga. Aaminaaduna waa rabitaanka suuq kasta oo raba inuu ganacsi la yeesho akhristaha soo socda. Waa sababta ugu badan ee bogagga internetka ee loo yaqaan 'clickbait' aysan wax u iibinaynin mooyee xayeysiinta. Waxay u baahan yihiin lambarro si loo kordhiyo sicirka xayeysiiska, ee maahan kalsoonida booqdayaashaas.
Salesforce Canada waxay diyaariyeen faahfaahin muuqaal ah, Sida loo qoro cinwaanno awood leh oo u baahan feejignaan. Dhexdeeda, waxay kula hadlayaan adeegsiga habka soo socda.
SHINE Habka loo qoro cinwaanada wanaagsan
S - Noqo gaar ah ku saabsan mawduuca aad wax ka qorayso.
H - Noqo waxtar leh. Bixinta qiimaha dhagaystayaashaada waxay kordhisaa iimaankooda iyo kalsoonida ay kugu qabaan maamul ahaan.
I - Noqo isla markiiba xiiso leh. Cinwaannada guud ee ereyada-cufan ma jaraan.
N - Noqo war bixin ah. Haddii qof kale qorey maqaal ka wanaagsan, la wadaag kooda oo waqtigaaga badbaadi!
E - Noqo madadaalo. Hadal suuqgeynta iyo lingo warshadaha ayaa hurdo galin doonta dhagaystayaashaada.
Infographic wuxuu kugula talinayaa CoSchedule's Falanqeeyaha Cinwaanka Boostada ee Blog-ka, taas oo i siisay B + cinwaankan. Dhibcahaani wuu sarreeyay sababtoo ah Sida loo cunsur. Dhibcaha guud ayaa ku saleysan iyaga Qiimaha Suuqgeynta Dareenka algorithm oo saadaalineysa sida ugu wanaagsan ee cinwaanka loo wadaagi doono iyadoo lagu saleynayo ereybixinta la adeegsaday.
Hal xeeladood oo fudud oo qorayaasha waaweyn ay sii wadaan inay i tusaan oo shaqeynaya ayaa ah sida cinwaankaaga loogu duudubo erayga adiga ama midkaaga sidaas darteed waxaa lagugu qasbay inaad toos ula hadasho akhristaha. Inaad si toos ah ula hadasho akhristahaaga waxay shaqsiyaysiineysaa khibrada waxayna dhiseysaa xiriir degdeg ah oo ka dhexeeya adiga iyo akhristahaaga, kuna dhiirigelisa akhristayaashaada inay guji-dhex mariyaan si ay u akhriyaan inta soo hartay.
Tags: heerka-riixclickbaithawlgelintamadadaalocinwaanadawaxtar lehsida loosida cinwaanka loo qorosida loo qoro cinwaanadainfographicoo xiiso lehwar bixin ahiibiniibinta canadabogga natiijooyinka raadinta engineserpiftiimogaar ahkoobabqoraalada cinwaanadaqorista cinwaanno
Jul 11, 2016 markay ahayd 9:53 AM
Talooyin fiican, Douglas! Ma ogtahay waxa Waxaan sidoo kale u adeegsadaa aaladaha sida HubSpot Topic Generator ama Blog Blog Generator ee BlogAbout - waxay iga caawiyaan inaan qeexo cinwaan caadi ah oo ku saabsan sida ay u soo jiidaneyso akhristayaasha. Waxaad ku arki laheyd tusaalooyin cinwaan ah cinwaannada ay soo saaraan aaladahaan barteyda http://www.edugeeksclub.com/blog .
By the way, kama aanan maqlin ku saabsan Falanqeeyaha Cinwaanka - Xaqiiqdi waan isticmaali doonaa mustaqbalka.